Ikhuphoni uLingo kanye Namatemu - Amanani
avelaphi amaqanda angcolile?
okuhamba kahle ngokhilimu omuncu
indlela yokupheka i-goulash ebhodweni eliphuzi
ungamisa iqhwa likabhanana kakhilimu
Ikhuphoni uLingo kanye Namatemu
Ukwenza amakhuphoni kunolimi lwayo uqobo… ukustaka, i-MIR, i-OYNO… konke lokhu kusho ukuthini? Nalu uhlu lwamagama wokuvumelanisa ajwayelekile… uma uhlangabezana nelinye elingekho ohlwini .. sicela ulishiye kumazwana angezansi futhi sizowengeza!
Konke Wena: Konke uwumagazini ongawuthenga ezitolo, ku-inthanethi noma ku I-Amazon lokho kugcwele .. ukuqagele! Amakhuphoni .. Futhi afaka izindlela ezinhle nokuningi! Uma uthola lo magazini, qiniseka ukuthi ugcina amakhuphoni ukubhangqa nokuthengisa!
Imiklomelo ye-Balance: Uhlelo lwe-Balance Rewards luhlelo lomvuzo wamaWalgreens. Sebenzisa ubulungu bakho ukonga khona manjalo ezintweni ezithengiswayo futhi uthole amaphuzu ezintweni ezifakiwe isonto ngalinye. Sebenzisa amaphuzu wamakhadi we-Walgreens.
Isibopho : Isibopho lapho amakhuphoni ahlela khona amadili abo.
BOGO: Thenga eyodwa uthole eyodwa. Lokhu uzokubona ekuthengiseni, imvamisa uthenga eyodwa uthole eyodwa mahhala noma uthenge eyodwa uthole intengo uhhafu owodwa.
I-BTFE : Amabhokisi Aphezulu Ezemfundo. Lezi yizitembu noma amakhuphoni emabhokisini athile emikhiqizo izikole eziwagcinayo ukuze zithole izinto zokwakha kanye nabantu abahweba ngazo amakhuphoni.
ikhekhe le-turkey ebhodweni le-crock
UCatherine / CAT: AmaCatalinas ngamakhuphoni aprinta ngaphandle kwemishini emincane etholakala kumarejista. Amakhuphoni ngokuvamile asebenza kuleso sitolo ekuvakasheni kwakho okulandelayo. Imvamisa banedethi yokuphelelwa yisikhathi ngakho-ke qiniseka ukuthi uyayihlola.
Amakhodi weCoke / Imivuzo yeCoke : Kutholakala eziqongweni zemikhiqizo ye-coke, lokhu kungaqoqwa futhi / noma kusetshenziselwe imivuzo ku- MyCokeRewards.com .
Faka Ikhuphoni : Kufakwa amaphakheji noma izincwajana zamakhuphoni ngokuvamile atholakala kumaphephandaba angeSonto. Ukufakwa okuvamile kufaka phakathi
I-Procter neGamble (PG)
I-Red Plum (RP)
Umthombo we-Smart (SS)
Ngokuvamile uzobona ireferensi yalokhu kufakwa kuziphesheli naku-coupon match ups. Isibonelo, ungabona (RP 01/27/13) … Lokhu kuzoba okufakwayo kweRed Plum okutholakala ephephandabeni ngoJanuwari 27, 2013.
Ama-coupon Avid azobamba amaphepha ambalwa ngamaSonto ukuthola lokhu kufakwa okuhle. Lokhu kuvumela ukuthi zifaniswe neziphesheli ezahlukahlukene.
Qaphela: NgoMgqibelo kusihlwa, Spend With Pennies posts a Sunday Coupon Preview lapho ungahlola kuqala okulindelwe ephepheni ngosuku olulandelayo (kungahlukahluka esifundeni sokuthenga).
Kuphindwe kabili noma kuphindwe kabili: Ezinye izitolo ziphinda kabili inani lamakhuphoni aze afike enanini elithile. Isibonelo uma unesigqebhezana esingu- $ 0.20, isitolo sakho singasiphinda kabili sibe ngu- $ 0.40. Kuzofanele uhlole isitolo sakho ukuthola inqubomgomo yabo ngokuphindwe kabili.
EB / ECB : Amabhakede angeziwe / ukunakekelwa okwengeziwe Amabhakede ayingxenye yohlelo lomvuzo we-CVS ekhemisi. Ungabhalisa ku-inthanethi noma esitolo. I-EB ngokuyisisekelo ifana ne- 'CVS cash' ongayisebenzisa ekuthengeni kwakho okulandelayo. Izinto ezithile ezithengiswayo zizonikela nge-EB ngokuthenga futhi ungazisebenzisa lezo EB ekuthengeni kwakho okulandelayo. Uma usuthengile okufanele i-EB, i-EB yakho izophrinta ezansi kwerisidi yakho. Lokhu kungenza amadili amahle noma amahhala!
Isibonelo uma uthenga into engu- $ 1 bese uthola i- $ 1 EB, uzokhokha u- $ 1 ephaketheni lakho kodwa uthole u- $ 1 ongamchitha ngokuzayo ekwenzeni leyo nto ibe mahhala.
EXP : Usuku lokuphelelwa isikhathi
I-H & B noma i-HBA : Izinsiza Zempilo Nobuhle. Lokhu kusho umnyango, imvamisa izinto zokugeza, umuthi wokuxubha, ukwakheka, ukhilimu wokushefa njll.
IP : Okuphrintwayo kwe-Intanethi. Amakhuphoni ungawaphrinta ku-inthanethi
ME : Imeyili Yesaphulelo. Lokhu kunikezwa okutholakala nomkhiqizo, okugcinwe esitolo noma ngisho naku-inthanethi. Qiniseka ukuthi ugcina iso lakho livulekile ngoba lezi zivame ukuba zenani eliphakeme futhi zibangele ukonga okukhulu!
Ikhuphoni Lomkhiqizi : Lawa amakhuphoni akhiqizwa ngqo ngumenzi. Uma usebenzisa lokhu esitolo umenzi uzobuyisela isitolo ngenani lekhuphoni.
VULA : Kuphuma Ephaketheni. Le yimali yangempela ozokhokha ngayo ephaketheni lakho ukuze uthole isivumelwano. Usengathola isaphulelo noma ezinye izinhlobo zesinxephezelo njengemiklomelo ngemuva.
DLALA : Ku-oda lakho elilandelayo. Ngokuvamile kubhekiswa ekulondolozeni imali / amakhuphoni ozowasebenzisa ekuthengeni kwakho okulandelayo kuleso sitolo.
I-P & G: I-Procter & Gamble. Kushiwo okufakiwe (bheka okufakiwe ngenhla) kanye / noma nenkampani iProcter & Gamble. I-P & G ikhiqiza imikhiqizo eminingi eyaziwayo! (Ziphinda zinikeze ngamasampula amahle kakhulu. Ungafuna eyodwa njalo ngekota!)
Umeshi wentengo (aka Ad Match) : Izitolo eziningi zizokuvumela ukuthi uthathe isimemezelo sesinye isitolo futhi zizofanelana nanoma iyiphi intengo esinye isitolo esinikezayo.
Sobuye sibone : Uma isitolo siphelile entweni ethile esendalini, ungahle ucele isheke lemvula. Bazohlonipha intengo yokuthengisa uma into isesitokweni. Qiniseka ukuthi ufunda isheke lakho lemvula ngokucophelela, imvamisa banosuku lokuphelelwa yisikhathi kubo.
RR: Bhalisa Imiklomelo. Lolu uhlelo lomvuzo wama-Walgreens. Uma wenza ukuthenga okufanelekile kwento (izinto) efanelekile ekhangisiwe ku-Ad Weekly Ad noma ekwenyuselweni okusesitolo uzothola imiklomelo (ezophrintwa nerisidi lakho). Le mivuzo ingatholakala ohambweni lwakho olulandelayo lokuyothenga lwe-Walgreens.
RP: IPlamu Ebomvu. (Bheka okufakiwe) I-Red Plum ikhiqiza ukufakwa kwamakhuphoni okutholakala kaningi kuma-Sunday Papers akho. I-Red Plum nayo inamakhuphoni aku-inthanethi.
SS : Umthombo ohlakaniphile. (Bheka okufakiwe) I-Smart Source ikhiqiza okufakiwe kwamakhuphoni okutholakala kaningi kuma-Sunday Papers akho. I-Smart Source nayo inamakhuphoni aku-inthanethi.
Okustakiwe / Okustakiwe : Isitaki ngokuvamile sisho ukusebenzisa amakhuphoni amabili ndawonye ukwenza ukonga okukhulu. Imvamisa unga 'beka' isigqebhezana somkhiqizi nesigqebhezana sesitolo entweni efanayo yokonga kakhulu. Qaphela: Ngokuvamile awukwazi 'ukubeka' amakhuphoni womkhiqizi amabili noma amakhuphoni amabili ezitolo.
Gcina Ikhuphoni : Lawa amakhuphoni akhiqizwa ngqo esitolo hhayi kumenzi. Izitolo azitholi imbuyiselo evela kubakhiqizi bala makhuphoni.
UPR noma + UP: Imiklomelo Ephezulu. Lolu uhlelo lokuvuza lweRite Aid. Uma ubhalisela ikhadi labo lempilo, ungalisebenzisa ezintweni ezifanelekela Imivuzo Ephezulu. Imivuzo izophrinta ezansi kwerisidi yakho futhi ingasetshenziswa njengokheshi ekuthengeni kwakho okulandelayo.
WYB : Lapho uthenga. Uzobona amanye amakhuphoni noma ukuthengisa okudinga ukuthi uthenge izinto ezingaphezu kweyodwa… ngokwesibonelo gcina u- $ 2 uma uthenga izinto ezimbili… Gcina $ 2 WYB 2.